Abwaan Faarax Murtiile Oo Tiriyay Gabay Uu Kula Dardaarmayo Golaha Cusub Ee Wakiilada Jsl! | WAJAALE NEWS
Abwaan Faarax Murtiile Oo Tiriyay Gabay Uu Kula Dardaarmayo Golaha Cusub Ee Wakiilada Jsl!
August 6, 2021 - Written by Editor:
DAWLAD Iyo BAARLAMAAN-ku Waa Ul iyo Diirkeed! Abwaan Faarax Murtiile
Gabay Cusub Oo Uu Tiriyay Abwaan Faarax Murtiile Ayuu Sheegay inuu ugu tallo-galay Golaha Cusub ee Baarlamaanka Somaliland & Waxqabadka bulshadii soo dooratay ka sugayso, ugana fadhido inay ka shaqeeyaan, waxaanu ku bilaabay:-
Danbar gabay, dubaax maanso & darinta suugaanta;
Dacwad erey, dabuub lays faro iyo dodo iyo sheeko;
Dibno erey ka soo baxa, hadii daawo laga qaato;
dabayl caafimaad gabay sidaan soo dalwinayaaye;
Dhegahii daloolaa, sidii diinta how gallo;
Dabanyada haddeer noo kacee, dihatay ciideydu;
Dadba nimankii laga soo xulee doorteen shacabkaygu;
xilka nimanka duudka u ritee, saaray dumadooda
Duhur laysu soo baxay ragii DIINTA lagu dhaarshay;
Aan u diro waxii dawahee shacabku doonaayo;
Dawladaha aduunyada hadii laysku wada duubo;
Oo ay inoo soo diraan deeq aan kala joogsan;
Ma daboosho baahida, waxaan debed ka eegnaaye;
Waxii dhididka loo daadiya deeqa aadmiga’e;
Badoo deyran, duunyadii aynu dhaqnay & dabaka ciideena;
Nimcaduu Daa’in inna siiyey baan hoosba loo deyine;
Durdurada diiraaba iyo biyaha dulundulceenaaya;
Hadii meelo loo kala duwoo, daadka loo xidhayo;
Ninna kama dab-raaceen dhulkee, waa la degi-laa;
Ku dalbada,oo dadkeena u diroo, daacad ugu hawla;
Lo’da daradta, deero dhashoo, dalawo geeleena;
Ee YURUB ka doondoonayow, waad delagantaaye;
Adna way ku soo daba mareen dalalka aad joogto;
Oo dadkiisii lahaa, nimcay kaa daldalayaane;
Ee ku dalbada, dadkeena u dira, oo daacad ugu hawla;
Dagaalkii SUWEYS waxuu ka dhacay, kaama diimoona;
Innaguna dariiq baynu naal, dunnidu maashaaye;
Dekedeena kama iibsadaan, daasad naafto ahe,
Haamaha shidaal kama daraan, doorkan manta ahe;
Iyagoo dawaaraynayey, dacal ka dhaafaane;
Sabaraynka daadihinayaa, sii dukaansada’e;
Diinaar-na kama qaadan karo, dawgay marayaane;
Xaq baa iga daboolanne, inaad dabo gashaan weeye;
Dambarka iyo labeenta, oo miyiga ciirta lagu daadsho;
Dalagii Wajaale oo midhaha deyrta laga goosto;
Cunto doorsan, daawada dhacday, iyo daalka iyo yogorta;
Niman baa digaag soo dejiyo, caano daasado’e;
Degdeg inuu u taajiro, raggaa suxuladow duubtay;
Ganacsigan dac-furay, ee siduu doono naga yeelay;
DADKU waxuu ku leeyahay, inaad dabo gashaan weeye;
Ugaadhii daleel carartay, ee durugtay mooyaane;
Dibin-gaalahii soo hadhay iyo diinkii dhoofsade’e;
Daa’iiska keymaha ayaa dooxa loo raraye;
Waa la dubay dhirtii dooxa iyo doogii xoolaha’e;
Dabna waxay sudheen geedahii, daawada ahaaye;
Raga dhuxusha daabulanayee, dubay u iibgeeya;
Bal innaynu deerada hadhay iyo duurka laga gaadho;
Ama aad dureemada baxdiyo, duurka ceentayso;
Deegaanku waxuu kaa rabaa, inaad difaacdaaye;
Caruur aan duruus qaadan bay dumarku haystaane;
Waa dib-u-dhac weyn oo ku yimi dawladnimadeena;
Waa in inanta daabiyada aan cidi danaynn joogta;
Iyo inanka doobiga site, geela daajinaya;
Iyo kuw adigtooradu dhalaan iyo tujaarteenu;
Waa inay duruus wada bartaan, doorba waxii jooga;
Degel qudha, hadaad wada furtaan dawladnimaddeena;
Goboladu daleel bay ahaan, laga dareeraaye;
Dabaq qudha hadday wada koaan, doorkii maamulayey;
Dadku waxuu ku soo uruurayaa, dabaqay fuuleene;
Sidii harar dib loo xidhay, hadday duubnayd shalay-toole;
Sidii derinta waa inaad furtaan, deeqda manta-na;
Doc kastoo la eegaba, dalkani waa mid daayacane;
Daw iyo jid buu doonayaa, daan kastow baxa’e;
Waa inaad dariiq u dhigtaan daalo iyo seylac;
Dalkani waa ISLAAM, oo dhulkani waa mid DAAHIR ahe;
Durdrukii fardowsaad, inuu Daa’in inna siiyo;
Ifkana darajo aad naga heshaan, weligii aan duugoobin;
Dabeecado shisheeyaad ayaan ciidan lagu daadin;
Ayaan DIMOQORAADIYADU noqon DIIN mid lagu aaso;
Oo dawga EEBE iyo sharciga lagu daboolaayo;
DAWLADA iyo BAARLAMAANKU waa ul iyo diirkeed;
Hadday kala dilaacaan awood daatay bay noqone;
Isdugsada, is-daadihiya oo ha laysku duubnaado;
Hanna kala dareerina idnkoon DOODA ku heshiinin;
Dawlad iyo baarlamaanku waa dawlis iyo ceele;
Hadii aan wadaan loo dardaro, noqon dastuurkeenu;
Dar aan fulin ayey noqonayaan, duunyada ooman’
Dawlada iyo baarlamaanku waa dab iyo baaruud;
Hadii aan dastuurkeenu noqon daw mid kala siiya;
Danab iyo hilaac bay noqdaan dila sokeeyaahe;
Dawlada iyo baarlamaanku waa daab iyo gudintii;
Hadii aan distoorkeenu noqon mid isku soo daaba;
Dogob iyo bir bay noqon oo midiba daan yaalo;
U damqada, u diir-naxa dadkoo, raaca dannahooda;
Ninna duubkii loo xidhay shacbiga yaanu ugu doobin;
Duudii Binu Israa’il, markii duunyo laga yeeshay;
Ee ay sida dameeraha rarteen duulkii maamulayey;
Dulmigii Fircoon wadday, markuu Daa’in uga hiishay’
Ee ay dibiga sii caabudeen Muuse CS dabadiisa;
Oo uu dulyimi oonkii, oo diinta laga leexshay;
Ee cadhada kula duulay, ee u duday walaakiina;
Adiguna dadkeygow ha noqon, qaar la duufsado’e;
Is-dugsada is-daadihiya, oo ha laysku duubnaado;
Hanna kala dareerinna idinkoon dooda ku heshiinin;
Dawgii qudhaanjadu markii ay wada daniinaysay;
Iyadoo dareere ah markii ay wada dulundulcaynaysay;
Ee duqoodii ku yidhi wada digtoonaada;
Adiguna dadkaygow waxbaan diirad ku arkaaye;
Idinkuna dadkaygow waxbaa saaqay dunnidiiye;
Is-dugsadda, is-daadihiya, oo ha laysku duubnaado;
Hanna kala dareerina, idinkoon dooda ku heshiinin;
Isagoon da’ weynayn markii Yuusuf CS lagu duulay;
Oo walaaladii dadkow xigay markay ceel ku dalaq siisay;
Daluuntii markii laga helee, ee dibedda loo saaray;
Darajo ayaa Ilaah SW ugu bedelay, oo doortay keligiiye’
Dibna wuu u maamulay, kuwii dahay naftiisiiye;
Adiguna dadkaygow hadday dunnidu kuu showrtay;
Dibindaabyo mooyee, hadday diiday nabadaada;
Is-dugsadda, oo is-daahiya, oo ha laysku duubnaado;
Hana kala dareerina, idinkoon dooda ku heshiinin;
Dabka olola, gaas daaraysa iyo biyo bakhtiinaaya;
Dawladnnimadu waa saas, ninkii danni ka haysoowe;
Intaasoo is-wada diidan, oo laysku daray weeyaane;
Iyagoon darqumo geysan oon daano kala gaadhin;
Ninkaan dabaq ku wada qaadi Karin, yaanu soo deyine;
Awr dad-cunna, mid dilla awrta kale, heeryo mid uun daaqa;
Dawladnimmadu waa saa, ninkii danni ka haysoowe;
Ninkii aan dar wada keeni Karin, yaanu soo deyine;
Haadka duula, daad soconaya, iyo diir aan la arkaynin;
Dawladnimmadu waa daabad aynu wasda duljoognaaye;
Adna darewalkeedow hadaad doontii nagu qaaday;
Mowjaddo dilaamaa jiroo, oo daadna hoos maro’e;
Daaraanta meesha leh, inaad naga du’daa weeye;
Allahayoow dariiq toosan marri, madaxdaad noo doortay;